महिनावारी 'कप' के हो ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
२०७६ भदौ २१ शनिबार ०७:४६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौ, २१ भदौ । महिनावारी बेला तपाईं के प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हामीमध्ये धेरैलाई यसबारे थाहा नहोला। कतिले त नाम पनि सुनेका छैनौं होला। हाम्रो समाजको परिवेश महिनावारीबारे अहिले पनि धेरै संकुचित छ। सहरी भागमा यसलाई सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मान्ने सकारात्मक सोच विस्तार हुँदै गए पनि गाउँघरमा यो अझै ‘पाप’ नै कहलिन्छ। छाउगोठमा महिलाहरूले ज्यान गुमाएका समाचार आइरहेकै छन्।
महिनावारी स्वच्छ बनाउन हामी 'स्यानिटरी प्याड' प्रयोग गर्दै आएका छौं। अचेल 'ट्याम्पुन' पनि बजारमा देखिन थालेको छ। ट्याम्पुन भनेको कपासलाई लाम्चो आकार दिएर बनाइएको साधन हो, जुन महिनावारी बेला योनीभित्र राखिन्छ। यसले रगत सोस्छ। विदेशमा यसको चलन धेरै भए पनि हामीकहाँ प्याडजस्तो सर्वसुलभ छैन।
पहिले त आफूलाई कुन आकारको कप मिल्छ भन्ने यकिन हुनुपर्छ। यसबारे चिकित्सक वा बिक्रेतासँग बुझ्न सकिन्छ। आकार मिल्दो कप योनीमा कसरी छिराउने भन्नेबारे पनि उनीहरूले नै जानकारी दिनेछन्। इन्टरनेटमा भिडिओहरू हेरेर सिके पनि हुन्छ।
‘सी’ आकारमा पट्याएर प्रयोग गरिने यो कप सुरू सुरूमा अनौठो वा अप्ठ्यारो लागे पनि पछि सहज हुने माल्भिकाको अनुभव छ। कप भरिएपछि वा आफूलाई सहज भएको समयमा निकालेर सफा गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ।
‘साँच्चै भन्नुपर्दा महिनावारी कपको आर्थिक, शारीरिक, वातावरणीय सबै किसिमका फाइदै फाइदा छन्,’ माल्भिका भन्छिन्, ‘यसले महिनावारी सहज बनाउँछ, जसले स्वतः हाम्रो आत्मविश्वास बढाउँछ।'
(यो समाचार सेतोपाटीबाट लिइएको हो ।)